त्रिविद्वारा शुक्रबारदेखि सञ्चालन हुने सबै परीक्षा र पठन–पाठन स्थगन गर्ने निर्णय - लोकसंवाद
काठमाडाैँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शुक्रबारदेखि सञ्चालन हुने सबै परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म सवै परीक्षा स्थगन गर्न केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समिति र सम्बन्धित डीन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको त्रिविका कार्यवाहक शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. शिवलाल भुसालले जानकारी दिनुभभएकाे छ ।
'सरकारले नै कोभिड–१९ को सङ्क्रमण जोखिमका कारणले सबै परीक्षा स्थगन गर्ने भनेपछि हामीले पनि स्थगन गरेका हौँ, उहाँले भन्नुभयो, 'भोलिदेखि सञ्चालन हुने सबै परीक्षा स्थगन गरेका छाैँ ।' त्रिविले आज पूर्वनिर्धारित परीक्षा भने सञ्चालन गरेको थियो ।
परिषद् बैठकले त्रिवि अन्तर्गतका सम्पूर्ण आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको पठन–पाठन पनि आजदेखि चैतमसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । हिउँदे/ वर्षे बिदा पाउने शिक्षक/कर्मचारी/ विद्यार्थीलाई आगामी वर्ष बिदाबाट मिलाउने गरीे निर्णय गरेको कार्यवाहाक शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. भुसालले जानकारी दिनुभयो । त्रिविका सेवा आयोगका अन्तर्वाता र परीक्षाका कार्यक्रम सम्बन्धमा सेवा आयोगले सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराउने निर्णय समेत भएको छ ।